သားအဖသုံးယောက်ရှိုးဆိုဖို့ အိပ်မက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ရင်ဂို – Burmese.asia
ယောက္ခမကြီးနဲ့ အဆင်ပြေနေပါပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ကောင်းမြတ်စံ
”နောက်ဘဝမှာ မင်းသားဘဝကို လိုချင်ပါသလား”မေးခွန်းကို ဖြေလိုက်တဲ့ ဦးဇင်းကျော်ဟိန်း’
အဆိုတော်ကြီးရင်ဂို ကတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာ သားအဖသုံးယောက်ပေါင်းပြီး ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်မယ့် ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု လုပ်ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကို Duwun Media ကနေပြောပြခဲ့ပါတယ်။
” One Man Show လုပ်ဖို့တော့ စိတ်မကူးပါဘူး များသောအားဖြင့် ကိုညီထွဋ်နဲ့တွဲဆိုတဲ့ ပွဲတွေက များပါတယ်။ One Man ဆိုရင်တော့ စိတ်ထဲမှာ အင်ပါယာအဖွဲ့နဲ့ ထိုင်ပြီးတော့ ဆိုဖို့အိမ်မက်ရှိတယ်။ စင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ သားအဖသုံးယောက်ရှိုးဆိုဖို့ အိမ်မက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၈ ထဲမှာဖြစ်အောင် အမြန်ဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
သားသမီးတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
” အခုတော့ သူတို့စိတ်ကူးတွေကို သူတို့ထုတ်ဖော်နိုင်ပြီ။ အောင်မြင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာကလည်း သူတို့ဆက်ကြိုးစားဖို့ရယ်၊ ပရိသတ်အားပေးလာမှာကို စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ကိုယ်က မျှော်လင့်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေ” လို့ဆိုပါတယ်။
အဆိုတော်ကြီးရင်ဂိုကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိနေတုန်းပါ။ သားဖြစ်သူ အဆိုတော်ဟန်ထူးလွင် နဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဟန်နေလွင်လွင်တို့ကလည်း ဂီတလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Photo: ဟန်ထူးလွင်၊ ဟန်နေလွင်ဖေ့စ်ဘုတ်
PREVIOUS POST Previous post: ဘုရားရှင်ဆံတော် ဘာကြောင့်အရှည်ထားရတာလဲ ? ? ?
NEXT POST Next post: ကားပေါ် မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ သိန်း(၁၂၀)ကို ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူရဲ့အိမ်ထိ ပြန်လာပေးတဲ့ ရိုးသားသည့် တက္ကစီသမား